Hordhac:Kulan aad u xiiso badan oo caawa dhexmari doona labada kooxood Manchester United iyo Manchester City
Kooxda Man United ayaa marti galin doonta kooxda Man City kulan ka dhici doona garoonka Old Trafford kana tirsan Semi-final-ka tartanka Carabao Cup. Labada kooxood ayaa kulmi doona markii 2-aad xilli ciyaareedkan kadib markii ay bar-baro ku kala bexeen kulan horyaalka ah oo ka dhacay Old Trafford. Labada kooxood ayaa kulanka soo gali doona iyaga oo isha ku haya gaadhista Final-ka tartanka Carabao Cup-ka ee xilli ciyaareedkan. Ciyaartan ayaa la sugayaa caawa 10:45 habeennimo.
Dhanka kale Kooxda Man City ayaa xaqiijisay in xiddigaha Scott Carson, Cole Palmer iyo waliba mid ka mid ah shaqaalaha tababarka laga helay xanuunka Korona.
Kiisaskan cusub ayaa xaalka ku sii xumaynaya kooxda Man City iyada oo markan xanuunka laga helay Goolhaye, xiddig khadka dhexe ah iyo waliba mid ka mid ah shaqaalaha tababarka kooxda 1-aad. Goolhayaha laga helay xanuunka ayaa ah goolhayaha 35 jirka ah ee Scott Carson iyo xiddiga khadka dhexe ee Cole Palmer iyaga oo 6 xiddig ka dhigaya xiddigaha ilaa haatan laga helay xanuunka Korona. Kooxda Man City ayaa xaqiijisay in ay 3-da qof ee laga helay xanuunka Korona gali doonaan karantiil si ay uga soo kabsadaan xanuunka Korona.
In this article:Carabao Cup, football, Old Trafford, Sports news